Barkinta siligga ah ee loo yaqaan 'Silicone barkin' ee saxaafadda kulul waxaa loogu talagalay oo ay soo saartay shirkadeena oo u heellan taageerida saxaafadda kulul iyadoo loo eegayo baahida suuqa, inta badan loo isticmaalo mashiinka wax lagu riixo ee lagu riixo sagxadda laminate, walxaha, plywood, albaabada, qalabka guryaha iyo munaasabadaha kale.
Sharaxaadda Badeecada barkin caag Silicone ah oo loogu talagalay laminator sameynta kaarka waxaa loogu talagalay oo ay soo saartay shirkadeena u heellan taageeridda warshadaha kaararka sameynta iyadoo loo eegayo baahida suuqa, ku habboon dhammaan noocyada kaararka bangiga, kaararka deynta iyo wax soo saarka kaararka casriga ah. Barkinta caagga ah ee silikoon ee ay soo saarto shirkadayada waxay isticmaashaa laba nooc oo qaab dhismeed ah, taasi waa KXM4213, laba dhinac oo caag ah oo silikoon ah oo leh qaab, dhar maro adag oo lakabka dhexe ah. KXM4233, laba dhinac ayaa dareemay, la ...
Faahfaahinta alaabada Xaashida caag Silicone ee warshadaha dhalada waa qeyb muhiim ah oo shirkadeena u heellan taageerida muraayada foornada faakiyuumka ku daatay sida ku xusan baahida suuqa. Foornada faakiyuumka la dahaadhay waxay isticmaashaa mabda 'vacuum, ka dhig dhalada kuleylka xaaladaha faakiyuumka, cadaadiska jawiga, u ogolow galaaska ku jira bacda faakiyuumka in la riixo si looga saaro hawo oo aan sameyn karin goobooyin, bacda faakuumka waxay ku jirtaa kuleyliyaha iyo xaaladaha faakiyuumka lagu shubay si ay u sameeyaan labo ama qaybo badan oo dhalo ah iyo EV ...
Sheet Rubber Silikoon Waayo, Vacuum Press
Xaashida cinjirka ah ee silikoon ee loogu talagalay saxafadda faakiyuumka Waraaqda caagga ah ee loo yaqaan 'vacuum press' waxaa loogu talagalay oo ay soosaartay shirkaddayada u heellan inay taageerto saxaafadda faakiyuuga sida ku cad baahida suuqa. Xaashida caagga ah ee silikoon ee saxafadda faakiyuumku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mashiinka saxaafadda faakiyuumka, waxay saamayn toos ah ku yeelan doontaa waxtarka filimka iyo isticmaalka kharashka qalabka faakiyuumka. Xaashida cinjirka ah ee silikoon ee loogu talagalay saxaafadda faaruqa ah ee ay soo saarto shirkaddeena waxay isticmaashaa alaabada ceyriinka ah ee laga keeno Jarmalka, waxay qaadataa wax soo saar heer sare ah ...
Tayada waa nolosha shirkad. Shirkaddu waxay muhiimad weyn siineysaa xakameynta tayada wax soo saarka. Waxay leedahay koox shaqaale maarayn tayo leh ah, oo ku qalabaysan shaybaarro wax soo saar xirfadeed leh, qolal tijaabo ah, iyo shaybaarro.
Saxanka silikoon ee gaarka ah ee warshadaha muraayadda dahaarka leh ayaa qayb muhiim ah ka ah shirkadeena foornada faakiyuumka nadiifinta ah sida ku xusan baahida suuqa.
caabbinta xirashada wanaagsan iyo waxqabadka qabashada wanaagsan. isticmaalka warshadaha dharka sida jarista dharka, sida jet, biyo, usheeda dhexe, gripper loom iyo mashiinka baaritaanka dharka, daabacaadda iyo qalabka midabaynta.
Suunka ugu adag
Suugaanta 'Rough Top Conveyor Belt' waxay bixisaa kumanaan faro fiiqan oo qabsan kara si ay u haystaan ​​alaabooyin la soo baakadeeyay ama cutubyo la qaadayo ama hoos loogu dhigayo fasalada dhaadheer ugu badnaan 35 darajo. Suunka 'Rove Top Conveyor Belt' waxaa lagu heli karaa daboollo caag madow iyo madow ah
Falsafadda shirkadeena ayaa ah inay ku guuleysato suuqa tartan iyo iskaashi, isku dhafka xoogagga hal-abuurka, dhisaan summad daacadnimo leh, mustaqbalna u adeegsanno adeeg.
Qaab-dhismeedka qeexida sheyga elastomer Wadarta midabka Xoog siligga 1% dheereynta ugu yaraan dhexroor wareega Heerkulka dhumucdiisuna N / mm culeyska la cayimay mm Range mm N / mm ℃ Suunka gudbiyaha PVC Hal dhar ah- E1 PVC 1 Caddaan cagaaran 80 4 10/25 -90 Mid ka mid ah laba caagad leh maro- E1 1.5 160 8 40/70 Laba caag ah - E1 2 160 8 50/75 Laba caag ah oo laba ah - E2 2.5 200 10 55/80 Laba caag ah laba dhar- E2 3 200 10 60/90 Laba seddex faasas ah. ..
Suumanka xamuulka qaada PVC Light